Apple inotangisa yechitatu yeruzhinji beta yeiyo iOS 11 IPhone nhau
Apple inotangisa yechitatu yeruzhinji beta yeIOS 11
Isu tinonyatsotevera zvese chii chitsva muIOS 11, uye iri iro zhizha inguva yenhau dzeanoshanda masystem evakomana pane iro bhuroka. New iOS yatinogona kuyedza mune yavo Beta vhezheni nekutenda kuvhurwa kweApple beta bvunzo chirongwa, chirongwa chave chiripo kwekanguva uye icho chinonakidza nekuti nacho tinogona kuyedza zvese izvo zvitsva zvinhu zvakapihwa kwatiri pamberi peumwe munhu .
Uye kana nezuro Apple yakaburitsa iOS 11 Beta 4 yevagadziri, nhasi izuva rekuvhurwa kwechitatu yeruzhinji Beta yeIOS 11. A nyowani Beta vhezheni yatinogona tese kuisa kuti tiongorore izvi zvitsva zveIOS 11. Mushure mekusvetuka isu tinokupa iwe hwese ruzivo rweiyo nyowani yeruzhinji Beta 3 yeIOS 11.
Iyi vhezheni itsva IOS 3 Beta 11 inotiunzira dzese nhau dzatakaona mune yechina beta yevagadziri veIOS 11. Iyo beta vhezheni iyo inotisvitsa isu zvimwe kuchinja dhizaini yeApple maapplication emifananidzo uye pamusoro pezvose kuvandudza mashandiro uchishandisa system. Isu tanga tichiedza iOS 11 Beta 4 (yevagadziri) kubvira nezuro, uye chokwadi ndechekuti inoshanda mushe, iri padyo padyo neiyo yekupedzisira vhezheni, kunyangwe zvirinani tichaona mamwe maviri mabheta shanduro isati yapera. kuburitswa mumwedzi waGunyana.
Saka unoziva, mhanya kurodha beta yazvino yeIOS 11, iyo beta 3 yeiyo nyowani yekushandisa sisitimu yeApple nharembozha. Chekutanga pane zvese uchafanirwa kunyoreswa mu yeruzhinji beta chirongwa Apple, yeizvi iwe unofanirwa kutevedzera matanho atinokusiira iwe mu tumira nezve kusaina chirongwa ichi. Gare gare, iyi nyowani yeruzhinji beta vhezheni inogona kuwanikwa muapp Zvirongwa, muchikamu cheGeneral uyezve muSoftware Gadziridza, ipapo iwe uchaona kuti wawana sei iyi nyowani Beta 3 yeIOS 11. Nakidzwa nazvo uye iwe unotoziva: chenjera nekuti uchawana imwe bhagi uye zvimwe zvekushandisa zvaunoshandisa muzuva rako zuva nezuva zvinogona kusashanda nemazvo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Apple inotangisa yechitatu yeruzhinji beta yeIOS 11
Mac Mukadzi akadaro
Ahh zvakanaka, ndatenda kunaka kwandakaverenga iyo posvo, ini ndinonyoresa seyekuvandudza uye kurodha pasi 🙂 Ndinoshamisika kuti chii icho "chimwe kana chimwe chipembenene" icho chaunotaura chichava ...
Pindura Mac Mukadzi
Hi: Handizive kana iwe watoisa izvi kana kumirira inotevera.
Iyo yakagadzikana, unogona kuiedza pasina matambudziko 😉
Chinondidzorera kumashure ndechekuti inokurumidza sei, ivo vanoti, bhatiri rinodonha.
Uye zvakadii nenyaya yebhatiri? Unogona kubata kwenguva yakareba zvakakwana?
Francisco Moreno Jimenez akadaro
Mubvunzo mumwe, ndeupi wakagadzikana kune veruzhinji kana vanogadzira?
Pindura kuna Francisco Moreno Jimenez
Iyo yakafanana Beta 😉
iOS 11 ichatibvumidza isu kutora kutonga kweiyo otomatiki WiFi kubatana
Nyamavhuvhu yaizove nguva yekuzivisa iwo Apple Watch Series 3